Tag: wordpress isiokwu | Martech Zone
Tag: wordpress isiokwu
Tinye CSS Animation Gị WordPress Site na CSS Hero's Plugin
CSS Hero bụ ezigbo akụ maka mgbanwe CSS na WordPress gburugburu ruo oge ụfọdụ. Ngwaọrụ dị ka ndị a na-eme ka ndị ọrụ WordPress dị mfe ịhazi atụmatụ ha, mana enweghị ahụmịhe nzuzo CSS dị mkpa. CSS Hero Atụmatụ Gụnyere Point na Pịa Interface - òké hover na pịa mmewere ịchọrọ idezi ma gbanwee ya iji kwado mkpa gị. Agnostic Okwu - Tinye ike ike na gburugburu gị, ee e
Ọchịchọ maka mmepe WordPress na-aga n'ihu na-eto ma ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị ahịa anyị niile nwere ma ọ bụ saịtị WordPress ma ọ bụ agbakwunyere WordPress blog. Ọ bụ nkwenye siri ike - ọ bụghị mmadụ niile hụrụ ya n'anya mana enwere ọtụtụ isiokwu, plugins, na ọnụ ọgụgụ ndị mmepe na ọ nwere ezi uche. Ikike igbanwe ọnụnọ weebụ gị na-enweghị ikpochapụ ikpo okwu ma maliteghachi bụ naanị nnukwu uru. Ọ bụrụ na ị nwere
M na-achọ ngwa mgbakwunye ma ọ bụ ụfọdụ koodu ka ịkpọgharịa isi na ebe obibi anyị na DK New Media inwe obi uto ma dozie ulo obibi ntakịrị. Nsogbu bụ na enwere m isiokwu etinyere nwere mpaghara ụfọdụ maka akara mkpado na nkọwa nke saịtị ahụ, ọ nweghịkwa m ịchọrọ iwepụ ya maka mgbanwe a. Iji mee nke a na plugins na mgbanwe isiokwu ga-achọ
Tuesday, October 30, 2012 Monday, October 29, 2012 Douglas Karr
WordPress na-aghọ ụdị ikpo okwu dị mkpa nye ọtụtụ ụlọ ọrụ, mana ụlọ ọrụ nkezi anaghịdị eji akụkụ nke ike. Otu n'ime ndị ahịa anyị chọrọ ịtinye ngalaba akụ na saịtị ha mana ọ chọghị iji ya mee peeji ma ọ bụ na ntanetị. Nke a bá »exactly kpomkwem ihe WordPress na-akwado Custom Post Types maka! N'okwu a, anyị chọrọ tinye ngalaba Akụ na otu n'ime ndị ahịa anyị.
Tọzdee, Septemba 17, 2009 Monday, November 9, 2020 Douglas Karr
Y’oburu na ogugu akwukwo nke blog m ogologo oge, o nwere ike ichotala mgbanwe ufodu n’oge na-adịbeghị anya. Anọ m na-arịọ maka enyemaka nke ndị na-ede blọgụ ọhụrụ ma gbanwee blog site na blọgụ m na blọọgụ anyị. Taa bụ nnukwu usoro ịga n’ihu na atụmatụ ahụ - ị ga - ahụ ugbu a na blọọgụ m nwere isiokwu ọhụrụ! Ọ bụ otu n'ime nke anyị, Jon Arnold President nke Tuitive Group mepụtara ihe ịtụnanya. O mere ihe mara mma